Eric Bailly oo noqday ciyaaryahankii sagaalaad ee ka dhaawacma kooxda Manchester United – Gool FM
Eric Bailly oo noqday ciyaaryahankii sagaalaad ee ka dhaawacma kooxda Manchester United
(Manchester) 25 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heshay dhaawac kale, kaddib markii uu ka dhaawacmay difaaceeda Eric Bailly.
Eric Bailly ayaa noqday ciyaaryahankii sagaalaad ee ka tirsan safka hore ee kooxda Man United oo uu dhaawac soo gaaro, waxaana uu ku dhaawacmay isagoo ku jida jira gudashada waajibaadkiisa qaranka Ivory Coast.
24-sano jirkaan ayaa dhaliyey goolka labaad ee ciyaarta qeybtii labaad ee kulankii ay 3-0 uga adkaadeen xulka qaranka Rwanda Sabtidii.
Bailly ayaa bandhig cajiib ah ka sameeyey kulankaas oo ka tirsanaa isreeb-reebka Koobka qarammada Afrika 2019 kaasoo xulkiisa uu garoonka ka baxay iyadoo aan gool laga dhalin.
Xulka Ivory Coast ma u ciyaari doono Bailly inta lagu jiro fasaxan caalamiga ah, sidaasi darteed daafacan dhexe ayaa haatan haysta lix maalmood oo uu ku soo kabsanayo ka hor kulanka Man United ay garoonkeeda Old Traffrod ku soo dhoweyn doonto Watford.
Man United waxaa horay uga dhaawacnaa xiddigaha safka hore ee kala ah Anthony Martial, Luke Shaw, Nemanja Matic, Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Matteo Darmian iyo Antonio Valencia.
"Hantideyda qeyb halaga siiyo Hooyadey haddii aan Isbitalka ku dhinto.".- Van Dijk